ကရုဏာတရားထားမိတဲ့ ရသကွေီ့းနဲ့ ခှေးမိဖုရား ( ပုံပွငျ ) - Tameelay
တခါတုနျးက တောတှငျးတနရောမှာ သဈခကျတဲလေးထိုးပွီး တရားအားထုတျနတေဲ့ ရသကွေီ့းတပါးရှိသတဲ့။ ဒီသဈခကျကြောငျးသင်ျခမျးလေးနားကို ခှေးပိနျမလေးတကောငျက လာပွီးတော့ ရသကွေီ့းဆှမျးစားပွီး ကနျြတဲ့ ဆှမျးကနျြဟငျးကနျြလေးတှေ စားလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီ ထမလစေား(ထမငျးလုံး အလေ အလှငျ့ကို စားသော)ခှေးမလေးဟာနစေ့ဉျနဲ့အမြှ ဆှမျးကနျြလေးတှေ လာလာစားနတောကွာလာတော့ရသကွေီ့းဟာ ခှေးမလေးကို သနားတဲ့အပွငျ သံယောဇဉျ ဖွဈလာပွီး …လူအဖွဈကို ဖနျဆငျးပေးလိုကျပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ခှေးမလေးဟာ အရှငျလတျလတျ လူမိနျးကလေးဘဝကို ပွောငျးသှားတာပေါ့။ ရသကွေီ့းဖနျဆငျးထားတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတော့လဲ ရုပျရညျ ရူပကာဟာ အလှနျလှပခြောမှနေ့ပေါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ခှေးမလေး တဖွဈလဲ မိနျးကလေးဟာ ရသကွေီ့းရဲ့ ဝယြောဝစ်စတှေ လုပျပေးရငျး တောထဲမှာ နလောလိုကျတာတနတေ့ော့ … တောကစားထှကျလာတဲ့ ဘုရငျကွီးတပါးက တှသှေ့ားပါလရေော။ဲ့ ဘုရငျကွီးဟာ ထုံးစံအတိုငျး နှဈသကျသဘောကတြျောမူတာပေါ့။ သူတို့နှဈသကျပွီ ဆိုမှဖွငျ့ ပိုငျရှငျ ရှိမရှိ မေးမွနျးပွီး (မေးလို့တျောသေးတာပေါ့) ဖခငျဖွဈသူ ရသကွေီ့းထံမှာ တောငျးရမျးပါတော့တယျ။
ဘုရငျမငျးမွတျ ကိုယျတိုငျက တျောကောကျတာဆိုတော့ ရသကွေီ့းကလဲ ရုတျတရကျ ဒီမိနျးကလေးဟာ ခှေးမလေးပါ လို့ ပွောမထှကျဘူးပေါ့။ဒါပမေဲ့ …အခုလို မငျးကွီးကို လြှောကျတငျမှာကွားပါတယျ။
“မွတျသောမငျးကွီး …အကြှနျုပျ၏ သမီးဖွဈသူ ဒီမိနျးကလေးဟာဖွငျ့ တောတှငျးသူ အရိုငျးအစိုငျးကလေး ဖွဈပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ အရှငျမငျးကွီးတို့ နနျးတှငျးရောကျတဲ့အခါ တစုံတရာ အပွဈကြူးလှနျမိခဲ့ပါလြှငျ သနားသောအားဖွငျ့ အပွဈမှ ခှငျ့လှတျတျောမူပါ”
ဘုရငျကွီးကလဲ နောငျခါလာနောငျခါဈေး …အခု လောလောဆယျ ဒီမိနျးကလေးကိုရရငျ ပွီးရောဆိုပွီး ခှငျ့လှတျမှာဖွဈကွောငျး ပွောပွီး ခှေးမိနျးကလေးကို ချေါသှားပါလရေော။
ရသကွေီ့းက ဘုရငျကွီးကိုမှာကွားပွီးတဲ့နောကျ ခှေးမိနျးကလေးကို …“ခဈြသမီး …မွငျ့မွတျတဲ့ နရောရောကျရငျ … မွငျ့မွတျတဲ့စိတျမှေးပါ …” ဆိုပွီး မှာကွားရပွနျပါတယျ။ခှေးမိနျးကလေးကလဲ ကောငျးပါပွီ အဘရသကွေီ့း ဆိုပွီး ဘုရငျကွီးချေါရာနောကျ ကောကျကောကျပါအောငျ လိုကျသှားပါသတဲ့။
နနျးတျောထဲရောကျသှားတဲ့ ခှေးမိနျးကလေးဟာ အရာရာအထူးအဆနျးတှခေညျြးမို့ အံ့ဘနနျးဖွဈနတောပေါ့။ ဘုရငျကွီးကလဲ သူ့ကို သငျကွားစရာရှိတာသငျကွားစပွေီးနောကျ အခမျးအနားနဲ့ မိဖုရားမွှောကျလိုကျသတဲ့။ ကုသိုလျကံမြား အကြိုးပေးခငျြတော့ နရေငျးထိုငျရငျး ခှေးမိဖုရားကွီးဖွဈသှားတာပေါ့။
ခှေးမိဖုရားကွီးဟာ နနျးတျောထဲမှာ နရေထိုငျရ အားလုံးအဆငျပွပေမေဲ့ တစုံတခုကွောငျ့ စိတျထဲ နမေထိ ထိုငျမထိဖွဈနပေါတယျ။ဘာလဲဆိုတော့ သူဟာ ခှေးဘဝကလာသူဖွဈတဲ့အတှကျ နနျးတျောထဲမှာ ခြှတျထားတဲ့ ခွနေငျး ဖိနပျတှကေို မွငျတဲ့အခါ ဒီဖိနပျတှရေဲ့ သားရနေံ့က သူ့ကို ဆှဲဆောငျနပွေီး ဖိနပျသားရတှေကေို ကိုကျခငျြစိတျကို မနညျးအောငျ့အီးထားရလို့ပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ လူခွတေိတျတဲ့ ညရောကျတော့ … သူ့စိတျကို မထိမျးနိုငျတော့တာနဲ့ ခွနေငျးဖိနပျတှေ ခြှတျထားတဲ့ နရောကို အမွနျသှားပွီး အာသာပွအေောငျ ဖိနပျတှတေရံပွီးတရံ ကိုကျဝါးပါလရေော။
မနကျမိုးလငျးတော့ ဖိနပျမွီးတိုတှေ မွငျတဲ့အခါ နနျးတျောထဲမှာ ကွှကျစီကွှကျစီနဲ့ပေါ့။ ဘယျကခှေးလခှေလှေငျ့က ဝငျပွီး ငါတို့ဖိနပျတှေ ကိုကျသှားသလဲ ဆိုပွီး နနျးတျောတခုလုံး အုံးအုံးကကျြကကျြနဲ့ ဖွဈနတေယျ။ နနျးတျောထဲ ရှိသမြှ ခှေးလခှေေးလှငျ့တှေ ဖယျရှားပဈပမေဲ့ နောကျတညမှာလဲ ဖိနပျတှေ ကိုကျခံရပွနျတာပဲ။ ဒီတော့ မဖွဈခဘြေူး … မှူးကွီးမတျရာတှကေ ဖိနပျစားတဲ့ ခှေးကို ညဘကျ စောငျ့ဖမျးဖို့ စီစဉျကွတာပေါ့။
ဒါကိုသိတဲ့ ခှေးမိဖုရားကွီးဟာ ဖိနပျမစားမိအောငျ စိတျထိနျးတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဗီဇဆိုတာ တျောရုံနဲ့ ဖြောကျလို့ရတာမှ မဟုတျဘဲ။ ဆန်ဒ ဆိုတာလဲ ထိမျးခြုပျဖို့ ခကျသားလား။ ညရောကျတော့ သူ့စိတျကို သူ မလှနျဆနျနိုငျပွနျဘူး။ သှားရတေမွားမွား ပါးစပျတပွငျပွငျနဲ့ဖိနပျတှဆေီ ရောကျသှားပွနျတာပဲ။ခှေးအလာကိုသာ စောငျ့နတေဲ့ မှူးမတျတှဟော ခှေးမိဖုရားကွီးကိုတော့ ဘယျသတိထားမိ မှာတုနျး။ ဒီလိုနဲ့ နောကျတည ဖိနပျတှကေိုကျခံ လိုကျရပွနျပါရော။
ဒီလို ခဏခဏ ဖွဈလာတော့ ဘုရငျကွီးနားကို ဒီသတငျး ပေါကျကွားသှားတောဘုရငျကွီးက ဖိနပျကိုကျသော ခှေးနှိမျနငျးရေးကျောမတီ ဖှဲ့စညျးစပွေီး ဒီခှေးကို မိအောငျဖမျးနိုငျရငျဖမျး … မဖမျးနိုငျရငျ မငျးတို့ကို ပွဈဒဏျပေးမယျ လို့ အမိနျ့ခမြှတျလိုကျပါတယျ။နနျးတျောထဲမှာ ခှေးနှိမျနငျးရေးကျောမတီက နဆေို့ငျးညဆိုငျးနဲ့ ခြောငျးဖမျးဖို့ ကငျးစောငျ့ကွတဲ့အခါသနျးခေါငျကြျောလောကျလဲရောကျခြိနျ …ခှေးမိဖုရားကွီးက ကုပျကုပျ ကုပျကုပျနဲ့ ထှကျလာပွီး ဖိနပျတှေ ကိုကျဝါးနတောကို ခြောငျးနတေဲ့ မှူးမတျတှကေ တှသှေ့ားတော့ … တယောကျမကျြနှာတယောကျကွညျ့ပွီး ခေါငျးယမျးကွတယျ။
ဘယျလိုလုပျရပါ့ တကယျ့မီးခဲပဲ ဘုရငျကွီးကို ဘယျလိုလြှောကျတငျမလဲ ဖိနပျတှေ ကိုကျနတေဲ့ခှေးကို မမိရငျလဲ ငါတို့မှာ ပွဈဒဏျ ခံရပအေုံးမညျ။ ဖိနပျစားတာ မိဖုရားကွီးပါလို့ ပွောရငျလဲ … ….
မနကျမိုးလငျးတော့ ညီလာခံမှာဘုရငျကွီးက မေးပါတယျ။
ကဲ .. ဘယျလိုလဲ … ဖိနပျကိုကျတဲ့ ခှေးကို မိပွီလား ပေါ့။ ခှေးမိဖုရားကလဲ နဘေးနားမှာ ခစားရငျး မှူးမတျတှေ ဘယျလိုမြားဖွမေလဲလို့ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ပေါ့။
“မှနျလှပါ … ဖိနပျစားတဲ့ခှေးဟာ ကြှနျတျောမြိုးတို့ထကျ ဘုနျးကံမွငျ့မားတဲ့သူ ဖွဈနတောကွောငျ့ ကြှနျတျောမြိုးတို့ တှသေ့ျောလညျး ဖမျးလို့ မမိပါဘုရား” လို့ လြှောကျတငျတော့ …
ဘုရငျကွီးလဲ … ဒါဖွငျ့ ငါကိုယျတျောမွတျကိုယျတိုငျ ဖမျးမယျ လို့ မိနျ့တျောမူလိုကျပါသတဲ့။
အဲဒီညမှာတော့ ခှေးမိဖုရားကွီးဟာ ဘုရငျကွီးနဲ့အတူ အိပျရာညောငျစောငျးထကျမှာ လဲလြောငျးနရေပမေဲ့ အိပျမပြျောနိုငျဘူးတဲ့။ ဒီညအဖို့ ဖိနပျမစားဘဲနရေ ကောငျးမလားတော့တှေးမိပါရဲ့ သို့သျောလဲ ရသတဏှာရဲ့ အလိုကို မလှနျဆနျနိုငျပဘေူး။ ခဏနတေော့ ဘုရငျကွီး အိပျပြျောသှားပွီ အထငျနဲ့ တိတျတိတျလေး အိပျရာကထပွီး ဖိနပျတှေ ရှိရာဆီကို သှားတယျ။ တကယျတော့ ဘုရငျကွီးက အိပျခငျြယောငျဆောငျနတောပါ။ ခှေးမိဖုရားကွီး ထသှားတာနဲ့ သူက နောကျက အသာလေးလိုကျသှားပွီး ခြောငျးကွညျ့တဲ့အခါ..ခှေးမိဖုရားကွီးဟာ ဖိနပျတှကေို အားရပါးရ ကိုကျဝါးနတော မကျြဝါးထငျထငျ မွငျလိုကျရတယျ။
ဒီမွငျကှငျးကွောငျ့ အံ့အားသငျ့ပွီး “ဟငျ” ခနဲ အာမဋေိတျ ထှကျသှားတော့ ဘုရငျကွီးလိုကျခြောငျးတာကို ခှေးမိဖုရားကွီးလဲ သိသှားတော့တာပေါ့။ဒါပမေဲ့ ဘုရငျကွီးဟာ အသာလေး လှညျ့ထှကျပွီး အိပျရာထဲပွနျသှားခှနေပွေီး သကျမကွီးတှေ တခခြနြဲ့ တညလုံး မအိပျနိုငျတော့ဘူး။
ဒီမိနျးကလေးရဲ့ အကငျြ့ဟာ ဆိုးလှခညျြ့။ ဒါကွောငျ့ ရသကွေီ့းက ငါ့ကိုမှာတာ နမှော။ ဘယျလိုလုပျရမလဲ … ဆကျထားပွနျရငျလဲ ရှိရှိသမြှ ဖိနပျတှေ မွီးတိုတှခေညျြးဖွဈကုနျမဲ့ အပွငျ … အကွောငျးသိနတေဲ့ မှူးမတျတှရေဲ့ ကဲ့ရဲ့စရာဖွဈအုံးမယျ၊ ပွဈဒဏျပေးပွနျရငျလဲ …. ရသကွေီ့းကို ကတိဖကျြရာကမြယျ … ။စသဖွငျ့ တောငျတှေး မွောကျတှေး စိတျမအေးနိုငျဖွဈနပေါတော့တယျ။
ခှေးမိဖုရားကွီးမှာ ဘုရငျကွီးတော့ ငါဖိနပျကိုကျတာ သိသှားပွီ၊ ငါ့အကွောငျး ရသကွေီ့းကို သှားမေးပွီး ငါဟာ ခှေးမှနျးသိရငျ ငါ့ကို သတျမှာဘဲ။ဒီတော့ ငါက အရငျ ရသကွေီ့းဆီသှားပွီး ငါ့အကွောငျး မဖျောနိုငျအောငျ သတျပဈရမယျ လို့ မိုကျမဲစှာတှေးပွီး မိုးမလငျးခငျဘဲ နနျးတျောထဲက ထှကျပွီး ရသကွေီ့းရဲ့ ကြောငျးသင်ျခမျးဆီ အပွေးအလှားသှားပါတော့တယျ။
ရသကွေီ့းဟာ ဈာနျအဘိဉာဉျရထားသူဆိုတော့ ခှေးမိဖုရားကွီး သူ့ကိုသတျဖို့ လာနတောကို သှားမွငျတယျ။
ဒါနဲ့ပဲ … “သွျော … ငါသနားပွီး ကယျထားတဲ့သူက ငါ့ကိုသတျဖို့ လာနပွေီ …. မိုကျမဲလစှေ …အငျး … သတ်တဝါတခု ကံတခုပပေဲ …” လို့စိတျထဲ တှေးလိုကျမိတာနဲ့ ဗွုနျးဆို မိဖုရားအသှငျကနေ မူလနဂိုအတိုငျး ခှေးဘဝကူးပွောငျးသှားပွီး ဘဝနှဈခုအကူး လမျးခရီးခြောကျကမျးပါးထဲ လိမျ့ကသြဆေုံးသှားပါတော့တယျ။
မွငျ့မွတျတဲ့ နရော ရောကျရငျ မွငျ့မွတျတဲ့ စိတျထားတတျရမယျ ဆိုတဲ့ ရသကွေီ့းရဲ့ မိနျ့ကွားခကျြကို နားမထောငျ တဲ့အတှကျ ခှေးမလေးဟာ ခုလို ဒုက်ခရောကျရတယျ။
အတှေးအချေါ အမွျောအမွငျ ဆငျခွငျဉာဏျ နညျးပါးတဲ့သူမြိုးကို ဘယျလိုကွီးမားတဲ့ ကရုဏာနဲ့ မွှငျ့တငျပေးလို့မှ မရဘူး …အဲလို မွှငျ့တငျပေးရငျကိုယျသာ ဒုက်ခတှရေ့နိုငျတယျဆိုတာမှတျသားပါ။
ကိုယျကအမွငျ့ရောကျနရေငျ မွငျ့မွတျစိတျထားရှိကွပါလို့ ပုံပွငျလေးဖတျလို့မှတျသားနိုငျကွပါစေ။
တခါတုန်းက တောတွင်းတနေရာမှာ သစ်ခက်တဲလေးထိုးပြီး တရားအားထုတ်နေတဲ့ ရသေ့ကြီးတပါးရှိသတဲ့။ ဒီသစ်ခက်ကျောင်းသင်္ခမ်းလေးနားကို ခွေးပိန်မလေးတကောင်က လာပြီးတော့ ရသေ့ကြီးဆွမ်းစားပြီး ကျန်တဲ့ ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်လေးတွေ စားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီ ထမ​လေစား​(ထမင်းလုံး အလေ အလွင့်ကို စားသော)ခွေးမလေးဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆွမ်းကျန်လေးတွေ လာလာစားနေတာကြာလာတော့ရသေ့ကြီးဟာ ခွေးမလေးကို သနားတဲ့အပြင် သံယောဇဉ် ​ဖြစ်လာပြီး …လူအဖြစ်ကို ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခွေးမလေးဟာ အရှင်လတ်လတ် လူမိန်းကလေးဘ၀ကို ပြောင်းသွားတာပေါ့။ ရသေ့ကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတော့လဲ ရုပ်ရည် ရူပကာဟာ အလွန်လှပချောမွေ့နေပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခွေးမလေး တဖြစ်လဲ မိန်းကလေးဟာ ရသေ့ကြီးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေ လုပ်ပေးရင်း တောထဲမှာ နေလာလိုက်တာတနေ့တော့ … တောကစားထွက်လာတဲ့ ဘုရင်ကြီးတပါးက တွေ့သွားပါလေရော။ဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်သက်သဘောကျတော်မူတာပေါ့။ သူတို့နှစ်သက်ပြီ ဆိုမှဖြင့် ပိုင်ရှင် ရှိမရှိ မေးမြန်းပြီး (မေးလို့တော်သေးတာပေါ့) ဖခင်ဖြစ်သူ ရသေ့ကြီးထံမှာ တောင်းရမ်းပါတော့တယ်။
ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုယ်တိုင်က တော်ကောက်တာဆိုတော့ ရသေ့ကြီးကလဲ ရုတ်တရက် ဒီမိန်းကလေးဟာ ခွေးမလေးပါ လို့ ပြောမထွက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ …အခုလို မင်းကြီးကို လျှောက်တင်မှာကြားပါတယ်။
“မြတ်သောမင်းကြီး …အကျွန်ုပ်၏ သမီးဖြစ်သူ ဒီမိန်းကလေးဟာဖြင့် တောတွင်းသူ အရိုင်းအစိုင်းကလေး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အရှင်မင်းကြီးတို့ နန်းတွင်းရောက်တဲ့အခါ တစုံတရာ အပြစ်ကျူးလွန်မိခဲ့ပါလျှင် သနားသောအားဖြင့် အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ”
ဘုရင်ကြီးကလဲ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး …အခု လောလောဆယ် ဒီမိန်းကလေးကိုရရင် ​ပြီးရောဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး ခွေးမိန်းကလေးကို ခေါ်သွားပါလေရော။
ရသေ့ကြီးက ဘုရင်ကြီးကိုမှာကြားပြီးတဲ့နောက် ခွေးမိန်းကလေးကို …“ချစ်သမီး …မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာရောက်ရင် … မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မွေးပါ …” ဆိုပြီး မှာကြားရပြန်ပါတယ်။ခွေးမိန်းကလေးကလဲ ကောင်းပါပြီ အဘရသေ့ကြီး ဆိုပြီး ဘုရင်ကြီးခေါ်ရာနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားပါသတဲ့။
နန်းတော်ထဲရောက်သွားတဲ့ ခွေးမိန်းကလေးဟာ အရာရာအထူးအဆန်းတွေချည်းမို့ အံ့ဘနန်းဖြစ်နေတာပေါ့။ ဘုရင်ကြီးကလဲ သူ့ကို သင်ကြားစရာရှိတာသင်ကြားစေပြီးနောက် အခမ်းအနားနဲ့ မိဖုရားမြှောက်လိုက်သတဲ့။ ကုသိုလ်ကံများ အကျိုးပေးချင်တော့ နေရင်းထိုင်ရင်း ခွေးမိဖုရားကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။
ခွေးမိဖုရားကြီးဟာ နန်းတော်ထဲမှာ နေရထိုင်ရ အားလုံးအဆင်ပြေပေမဲ့ တစုံတခုကြောင့် စိတ်ထဲ နေမထိ ထိုင်မထိဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ သူဟာ ခွေးဘ၀ကလာသူဖြစ်တဲ့အတွက် နန်းတော်ထဲမှာ ချွတ်ထားတဲ့ ခြေနင်း ဖိနပ်တွေကို မြင်တဲ့အခါ ဒီဖိနပ်တွေရဲ့ သားရေနံ့က သူ့ကို ဆွဲဆောင်နေပြီး ဖိနပ်သားရေတွေကို ကိုက်ချင်စိတ်ကို မနည်းအောင့်အီးထားရလို့ပါပဲ။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဖိနပ်မြီးတိုတွေ မြင်တဲ့အခါ နန်းတော်ထဲမှာ ကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ပေါ့။ ဘယ်ကခွေးလေခွေလွင့်က ၀င်ပြီး ငါတို့ဖိနပ်တွေ ကိုက်သွားသလဲ ဆိုပြီး နန်းတော်တခုလုံး အုံးအုံးကျက်ကျက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ နန်းတော်ထဲ ရှိသမျှ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ ဖယ်ရှားပစ်ပေမဲ့ နောက်တညမှာလဲ ဖိနပ်တွေ ကိုက်ခံရပြန်တာပဲ။ ဒီတော့ မဖြစ်ချေဘူး … မှူးကြီးမတ်ရာတွေက ဖိနပ်စားတဲ့ ခွေးကို ညဘက် စောင့်ဖမ်းဖို့ စီစဉ်ကြတာပေါ့။
ဒါကိုသိတဲ့ ခွေးမိဖုရားကြီးဟာ ဖိနပ်မစားမိအောင် စိတ်ထိန်းတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဗီဇဆိုတာ တော်ရုံနဲ့ ဖျောက်လို့ရတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဆန္ဒ ဆိုတာလဲ ထိမ်းချုပ်ဖို့ ခက်သားလား။ ညရောက်တော့ သူ့စိတ်ကို သူ မလွန်ဆန်နိုင်ပြန်ဘူး။ သွားရေတမြားမြား ပါးစပ်တပြင်ပြင်နဲ့ဖိနပ်တွေဆီ ရောက်သွားပြန်တာပဲ။ခွေးအလာကိုသာ စောင့်နေတဲ့ မှူးမတ်တွေဟာ ခွေးမိဖုရားကြီးကိုတော့ ဘယ်သတိထားမိ မှာတုန်း။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တည ဖိနပ်တွေကိုက်ခံ လိုက်ရပြန်ပါရော။
ဒီလို ခဏခဏ ဖြစ်လာတော့ ဘုရင်ကြီးနားကို ဒီသတင်း ပေါက်ကြားသွားတောဘုရင်ကြီးက ဖိနပ်ကိုက်သော ခွေးနှိမ်နင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းစေပြီး ဒီခွေးကို မိအောင်ဖမ်းနိုင်ရင်ဖမ်း … မဖမ်းနိုင်ရင် မင်းတို့ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ် လို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ထဲမှာ ခွေးနှိမ်နင်းရေးကော်မတီက နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းနဲ့ ချောင်းဖမ်းဖို့ ကင်းစောင့်ကြတဲ့အခါသန်းခေါင်ကျော်လောက်လဲရောက်ချိန် …ခွေးမိဖုရားကြီးက ကုပ်ကုပ် ကုပ်ကုပ်နဲ့ ထွက်လာပြီး ဖိနပ်တွေ ကိုက်ဝါးနေတာကို ချောင်းနေတဲ့ မှူးမတ်တွေက တွေ့သွားတော့ … တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီး ခေါင်းယမ်းကြတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ တကယ့်မီးခဲပဲ ဘုရင်ကြီးကို ဘယ်လိုလျှောက်တင်မလဲ ဖိနပ်တွေ ကိုက်နေတဲ့ခွေးကို မမိရင်လဲ ငါတို့မှာ ပြစ်ဒဏ် ခံရပေအုံးမည်။ ဖိနပ်စားတာ မိဖုရားကြီးပါလို့ ပြောရင်လဲ … ….
မနက်မိုးလင်းတော့ ညီလာခံမှာဘုရင်ကြီးက မေးပါတယ်။
“မှန်လှပါ … ဖိနပ်စားတဲ့ခွေးဟာ ကျွန်တော်မျိုးတို့ထက် ဘုန်းကံမြင့်မားတဲ့သူ ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်မျိုးတို့ တွေ့သော်လည်း ဖမ်းလို့ မမိပါဘုရား” လို့ လျှောက်တင်တော့ …
အဲဒီညမှာတော့ ခွေးမိဖုရားကြီးဟာ ဘုရင်ကြီးနဲ့အတူ အိပ်ရာညောင်စောင်းထက်မှာ လဲလျောင်းနေရပေမဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီညအဖို့ ဖိနပ်မစားဘဲနေရ ကောင်းမလားတော့တွေးမိပါရဲ့ သို့သော်လဲ ရသတဏှာရဲ့ အလိုကို မလွန်ဆန်နိုင်ပေဘူး။ ခဏနေတော့ ဘုရင်ကြီး အိပ်ပျော်သွားပြီ အထင်နဲ့ တိတ်တိတ်လေး အိပ်ရာကထပြီး ဖိနပ်တွေ ရှိရာဆီကို သွားတယ်။ တကယ်တော့ ဘုရင်ကြီးက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ။ ခွေးမိဖုရားကြီး ထသွားတာနဲ့ သူက နောက်က အသာလေးလိုက်သွားပြီး ချောင်းကြည့်တဲ့အခါ..ခွေးမိဖုရားကြီးဟာ ဖိနပ်တွေကို အားရပါးရ ကိုက်ဝါးနေတာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လိုက်ရတယ်။
ဒီမြင်ကွင်းကြောင့် အံ့အားသင့်ပြီး “ဟင်” ခနဲ အာမေဋိတ် ထွက်သွားတော့ ဘုရင်ကြီးလိုက်ချောင်းတာကို ခွေးမိဖုရားကြီးလဲ သိသွားတော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ အသာလေး လှည့်ထွက်ပြီး အိပ်ရာထဲပြန်သွားခွေနေပြီး သက်မကြီးတွေ တချချနဲ့ တညလုံး မအိပ်နိုင်တော့ဘူး။
ဒီမိန်းကလေးရဲ့ အကျင့်ဟာ ဆိုးလှချည့်။ ဒါကြောင့် ရသေ့ကြီးက ငါ့ကိုမှာတာ နေမှာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ … ဆက်ထားပြန်ရင်လဲ ရှိရှိသမျှ ဖိနပ်တွေ မြီးတိုတွေချည်းဖြစ်ကုန်မဲ့ အပြင် … အကြောင်းသိနေတဲ့ မှူးမတ်တွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်အုံးမယ်၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးပြန်ရင်လဲ …. ရသေ့ကြီးကို ကတိဖျက်ရာကျမယ် … ။စသဖြင့် တောင်တွေး မြောက်တွေး စိတ်မအေးနိုင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ခွေးမိဖုရားကြီးမှာ ဘုရင်ကြီးတော့ ငါဖိနပ်ကိုက်တာ သိသွားပြီ၊ ငါ့အကြောင်း ရသေ့ကြီးကို သွားမေးပြီး ငါဟာ ခွေးမှန်းသိရင် ငါ့ကို သတ်မှာဘဲ။ဒီတော့ ငါက အရင် ရသေ့ကြီးဆီသွားပြီး ငါ့အကြောင်း မဖော်နိုင်အောင် သတ်ပစ်ရမယ် လို့ မိုက်မဲစွာတွေးပြီး မိုးမလင်းခင်ဘဲ နန်းတော်ထဲက ထွက်ပြီး ရသေ့ကြီးရဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းဆီ အပြေးအလွှားသွားပါတော့တယ်။
ရသေ့ကြီးဟာ ဈာန်အဘိဥာဉ်ရထားသူဆိုတော့ ခွေးမိဖုရားကြီး သူ့ကိုသတ်ဖို့ လာနေတာကို သွားမြင်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ … “သြော် … ငါသနားပြီး ကယ်ထားတဲ့သူက ငါ့ကိုသတ်ဖို့ လာနေပြီ …. မိုက်မဲလေစွ …အင်း … သတ္တ၀ါတခု ကံတခုပေပဲ …” လို့စိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိတာနဲ့ ဗြုန်းဆို မိဖုရားအသွင်ကနေ မူလနဂိုအတိုင်း ခွေးဘ၀ကူးပြောင်းသွားပြီး ဘဝနှစ်ခုအကူး လမ်းခရီးချောက်ကမ်းပါးထဲ လိမ့်ကျသေဆုံးသွားပါတော့တယ်။
အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် ဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးတဲ့သူမျိုးကို ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ ကရုဏာနဲ့ မြှင့်တင်ပေးလို့မှ မရဘူး …အဲလို မြှင့်တင်ပေးရင်ကိုယ်သာ ဒုက္ခတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပါ။
ကိုယ်ကအမြင့်ရောက်နေရင် မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိကြပါလို့ ပုံပြင်လေးဖတ်လို့မှတ်သားနိုင်ကြပါစေ။
Categories General Knowledge Tags Story Post navigation
အမြားအမွငျမှာ hero ဖွဈခငျြကွတာလေ သူတို့ လုပျရပျက zero ဖွဈနတောကို မသိကွဘူး